PT-141 (Bremelanotide): Daawooyin cusub ayaa loo isticmaali jiray dhibaatada galmada
PT-141 (Bremelanotide): Daawo cusub oo loo isticmaalo Cilad-galmo jinsi
2. Sidee u shaqeysaa?
3. Codsiga PT-141
4. Dhammaan Faa'iidooyinka PT-141
5. PT-141 ee Qalabaynta Jinsiga
6. Sida loo isticmaalo PT-141
7. Waayo-aragnimo la wadaago dadka isticmaala PT-141
8. Halista ka dib isticmaalka PT-141
Wixii horumariye galmo ah oo dhalinaysa haweenka masruufka ku jira daqiiqadaha maamulka, PT-141 waa heshiiska dhabta ah. Bremelanotide laga soo bilaabo Melanotan II; Sidaa awgeed, waxay bixisaa saameyn isku dhaf ah. Melanotan II waxay sidoo kale ka caawisaa inay siiso maqaarka maqaarka iyo sidoo kale daweynta cudurrada jinsiga, oo ay ku jirto rabitaanka dumarka aan fiicnayn.
Peptid PT-141 peptide laguma soo saarin jirka dabiiciga ah sida hormoonada koritaanka kale. PT-141 (189691-06-3) Iyadoo aan ahayn xulasho aan xushmeynin ee soo dhaweeyayaasha melanocortin ayaa loo isticmaalay daaweynta xanuunada jinsiga waqti dheer.
Soo helitaanka PT-141 mid ka mid ah xoojiyeyaasha galmada waa arrin xiiso leh sida ay u dhacday shil ahaan. Cilmi-yaqaan "Mac Hadley" wuxuu naftiisa u tabarucay sidii shaybaarkiisa iyo sida uu u tijaabiyay jirkiisa isaga oo si toos ah u qaatay sideed saacadood oo toos ah. Waxay ahayd natiijo ka timid qadar labalaab ah oo ah Melatonin II, oo ah xarun hore loo ogaaday.
Imtixaanka Melanotan waxaa markii hore lagu sameeyay jiirka 1960s waxana uu tagay 1980s. Melanokortins waxaa loo yaqaanaa inay door muhiim ah ka ciyaaraan qawaaniinta shaqooyinka jirka badan. Melanotan 1, oo ah analog melanocortin, ayaa lagu tijaabiyey sidii wakiil tanning ah halka Melanotan II la baaray sida wakiilka qalad jilicsan.
Hase yeeshee, isticmaalka ayaa si kastaba ha ahaatee, joojiyay ka dib markii la ogaaday in ay keentay kororka cadaadiska dhiigga maadooyinka imtixaanka. 2016, peptide PT-141 peptide waxaa loo ansixiyay FDA iyada oo daaweyn loogu talagalay in haweenku ku dhacdo hoos u dhac galmo.
2. Sidee u shaqeeyaan?
PT-141 wuxuu u shaqeeyaa hypothalamus, si toos ah u horseedaya kordhinta rabitaanka galmada. Waxay ku xidhan tahay qabtayaasha melanokortin ee laga helay maskaxda, sidaas darteed waxay u diraan fariimo u dirista dareemayaasha ee xubnaha galmada. Si ka duwan noocyada kale ee jinsiga sida Viagra, oo ka shaqeeya nidaamka xididada, PT141-141 waxay si toos ah u saameeysaa libido. Taasi waa sababta daawada kale ee galmada aan loo tixgelineynin sida aphrodisiacs maadaama ayan wax saameyn ah ku lahayn rabitaanka qofka.
PT-141 waxay shaqeysaa iyada oo la dhiirigelinaayo iyo hirgelinta hoormoonka dopamine, taas oo loo yaqaan in ay door muhiim ah ka qaadato sii kordhinta dhiirigelinta jinsiga. Dopamine waa xarun si fiican loo yaqaan oo ah neurotransmitter iyo doorka ay tahay inuu kiciyo waxqabadka. Marka mid ka mid ah heerarka dopamin ee hooseeya, macnaheedu waa in libido-yadu sidoo kale ay noqon doonaan kuwo hooseeya. Waqtiga nuska PT-141 waa wareega 120.
♣ PT-141 buufin sanka ah
♣ Dadka kale.
♦ Waxay kordhisaa qanacsanaanta jinsiga
Ma waxaad leedahay hal dhibic, waxaad ka yaabtay waxaad samayn karto si aad galmo ahaan ugu qanacdo? Xaqiiqadu mararka qaarkood waxay qaadataa wax ka badan kaliya galmo si ay u gaaraan 'weyn' weyn 'O.' Jinsiga wuxuu ku siin karaa orgasmac ah laakiin ma aha sida maskaxda sida ay tahay. Dumarka, waxay xitaa ku dhibtaa marka loo eego ragga, sababtoo ah anatomy.
Muhiimadda isticmaalka xoojiyeyaasha jinsiga ee sinjiga ayaa kicin kara. PT-141 ee haweenka waxay siisaa dareen aad u xoog badan oo ku qanacsan hal mar marka la galmoodo. Haddii aad fiirinaysid wax faa'iido leh si aad u wanaajisid raaxeysigaaga galmada, daroogada mucjisada ah waa hubaal khaas ah.
♦ Waxay bixisaa tamar badan
Waxaad lahaan kartaa xakameyn galmo oo aad u sareysa, laakiin aanad awood u lahayn inaad sameyso. Nolol la'aantu ma aha oo kaliya waxay saameyneysaa noloshaada jinsigaaga, laakiin maalin kasta nolol maalmeedkaaga. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan ka heli doonin raaxo aad ku dhex galeyso qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada aad jeceshahay oo ay noqoto mid firfircoon.
Awoodda tamarta macnaheedu maahan in noloshaada jinsigaaga ay ka dhammaato. Looma baahna walwal joogto ah sababtoo ah waxaa jira hab aad ku heli karto koronto tamareed iyo weliba dareenka galmadaada.
Marka aad isticmaasho PT-141, waxaad ogaan doontaa in aad helayso tamar badan oo aad dareentid da 'yar.
♦ Kordhinta kalsoonida jinsiga
Mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee go'aamiya in aad galmo ku qancin karto waa kalsoonida aad adigu leedahay. Kalsoonida galmada waa dammaanad aad hesho si aad sariirta u fidin karto. Tusaale ahaan, haddii adiga iyo saygaadaba aad ku heshay walxo duurjoog ah, waxaad u badan tahay in aad ku guulaysato kalsoonida aad haysatay farshaxanka.
Waa mid ka mid ah sifooyinka ugu qotomsan ee qofku yeelan karo. Markaad kalsooni sariirta sarreyso, waayo-aragnimada oo dhan waxay u egtahay inay ku raaxeysan karto sidii hore. Xitaa in ka badan, waxay kaa dhigeysaa mid raaxo leh markaad galmo sameyneyso.
Dadka intooda badan, kalsoonida galmada maaha wax fudud in la helo sababtoo ah waxay u malaynayaan in daciifnimadooda ay qaateen walaac. Marka kalsoonidaada hooseeyso, helitaanka orgaanku wuxuu noqonayaa heshiis weyn. Faa'iidada la xidhiidha isticmaalka xeeladaha galmadu waa in ay kaa dhigayso inaad la kulantid galmada ugu faraxsan.
PT-141 loogu talagalay Dhibaatooyinkaaga jinsigaaga waxeey ku xiran yihiin dhamaanba kalsoonida aad marwalba u baahan tahay. Dumarka kalsooni-galmoodka leh waxaa loo yaqaanaa in ay galmo firfircooni galaan iyo xitaa xiiso badan sariirta. Lama yaabin isticmaalka PT-141 ee haweenka waxay kordhisaa maalin kasta. Marka aad isticmaasho PT-141, waxaan idiin ballanqaadayaa in kalsoonidaada galmadu ay si weyn u kordheyso waqtiga ugu gaaban.
♦ Wuxuu kordhiyaa midabka libido iyo rabitaanka galmada
Waad ogtahay in lammaanahaaga uu ku siinayo markaad hurdo galiso ama madax xanuun si aad uga fogaato galmada. Waxay xitaa ka sii buuqsantahay marka dadka kale ee muhiimka ah ay diyaar u yihiin, laakiin taasi waa waxa ugu dambeeyey ee aad ka fekeri karto. Taasi waxay adkayn kartaa xidhiidhkiina, gaar ahaan haddii ay jiraan waxyaabo aad u fiican sanadihii hore.
Maanta, in ka badan 30 boqolkiiba haweenka ayaa la silcaya rabitaan la'aan galmo adduunka. Sababta ay arrintani u noqotey mid aad u badan dumarka ayaa ah in arrimo badani ay wax ku biiriyaan. Inkastoo heerarka estrogen ee hooseeya ama isbeddelka wax soo saarka hoormoonku ay yihiin qaar ka mid ah sababaha rabitaanka galmada ee loo qaadan karo dhabarka, kiniinka ilaalinta dhalmada, arimaha xiriirka, daal, niyadjab, walaaca iyo daawooyinka qaar ayaa sidoo kale u horseedi kara.
Haddii aad dareentid in dantaada ku saabsan galmada ay hoos u dhacdo maalinta, taasi waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa xanuunka rabitaanka galmada ee galmada. Waxyaabaha wanaagsani waa PT-141 oo ku saabsan cillad jinsi ah waxay ka caawin kartaa inuu tirtiro tan. Waxay xaqiijineysaa in aad hesho jimicsi jidheed oo buuxa oo badanaa u soo noqda.
Maanta maqaarka maqaarku wuxuu noqday mid caan ah. Maalmihii hore, maqaarka maqaarku wuxuu calaamad u ahaa in mid ka shaqeynayey qorraxda saacado badan. Maalmahan, maqaarka maqaarka waxaa loo tixgeliyaa kuwa jecel barwaaqada iyo lahaansho caafimaad leh. Iyada oo ay dadku isku dardaraan dhammaan noocyada dharka sida looshka tanning, qoryaha daruuriga ah, daboolka dibadda, iyo maqaarka gudaha, maxaad u maleyneysaa inay noqon karto faa'idooyinka alaabta?
Tanning waxay ku siin doontaa tan tan dahabka ah oo ka tagi doonta qof kasta oo dharbaaxaya. Haddii aad tahay nooca dadka jecel inay istaagaan, markaa maqaarku waa inuu ku jiraa liistada baaldi. Celebrities ayaa bixisay kumaan kun oo doolar si ay maqaarkooda u dillaacaan tan oo ah waxa ay siineyso saameyn dheeraad ah oo ku saabsan xirfadahooda. Labadayadu labadooduba waan isku raaci karnaa in maqaarka cirridku uu u muuqdo mid jirran iyo mid xanuusan. Sida ugu wanaagsan ee aad u heli kartid dharka ugu wanaagsan, timo qurux badan oo muuqaal ah iyo ilko caddaan ah, tan dahab ah ayaa kuu sharxi kara aragtidaada adigoon wax dhib ah haysan.
Haddii aad tahay jidh-dhisiye oo aad dareentid sida jirkaaga maskaxda ah ee aan la ogaanin, waa inaad isku daydaa maqaarka maqaarka. Tani waxay kor u qaadeysaa wareegyada jidhkaaga, taasoo ka dhigeysa in faa'iidooyinkaaga aad u badan la dareemi karo. Dhibaato ayaad uheshay oo aad siineysid jimicsigaaga oo dhan, maxaad u tilmaantey tan tan si aad u amaantid muruqyadaada?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu heli karo tan, laakiin ka Codsiga PT-141 qaadaa maalinta. Qatarta badan ee qorraxdu waxay u horseedi kartaa dhaawac maqaarka ah oo xitaa ka sii dareysa inaad leedahay kansarka maqaarka. Mid ka mid ah macaashka PT-141 waa in ay tahay mid amaan ah ayna u badantahay in ay kuu keento saameynahaaga. Bremelanotide wuxuu ku siinayaa tan cadcad tan iyo markii uu saameeyo wax soo saarka melanin, kaas oo ka masuul ah xajinta maqaarka. Sidaas darteed haddii aad marwalba rabto geeddi-socodka ilaalinta nabdoonaanta iyo mid ku siin doona natiijooyin fantastik ah, PT-141 (189691-06-3) waa jidka loo maro.
♦ Ereyada xoogan
Ma waxaad ka heleysaa caqabad soo gaarta qalitaanka? Adigu maaha kan keliya. Malaayiin rag ah ayaa la dhibtooday iyadoo intooda badan ay dareemayaan xishood in ay xitaa cidna u sheegaan.
Qof kastaa wuxuu rabaa in uu sii xoogeysto. Xitaa kuwa ku qanacsan xajmigooda guska waxay u baahan yihiin inay ku dhajiyaan xoqidda adag si ay u helaan jinsi xiiso leh. Waa hagaag haddii aad rabto korriin xoog leh isticmaal PT-141. Waa cilad galmo weyn oo hubinaysa in qalitaankaagu uu yahay mid adag sidii dhagax weyn.
(1). Marka loo barbardhigo kuwa kale ee xoojiya galmada
PT-141 waxay la wadaagaan waxyaabo badan oo la mid ah kuwa kale ee dhiirrigeliya galmada sida viagra, laakiin sidoo kale waxaa jira farqi yar oo sidoo kale ah. Sida hore loo sheegay, PT-141 waxay ka shaqeysaa hypothalamus halkan si toos ah ayey u saameyneysaa rabitaankaaga galmada. Dhanka kale, shaqada kale ee nidaamka xididdada jirka iyadoo la kordhinayo xaddiga dhiiga ku qulqulaya guud ahaan jirka, gaar ahaan xubnaha taranka. Kordhintayaasha galmada ee noocaas ah looma oran karo aphrodisiacs.
Sida laga soo xigtay qiimaynta PT-141, natiijooyinka PT-141 waxay qaataan waqtiga ugu gaaban si ay u soo gaadhaan saameyn. Tusaale ahaan, dumarka qaarkood ayaa isbeddel ku samayn kara dhowr daqiiqo gudahood inta ay kuwa kale qaadanayaan, waxay qaadan kartaa saacado. Dhamaantood, PT-141 waa mid ka mid ah farsamoyaqaannada isdaba-joogta ah ee dhaqdhaqaaqa galmoodka ah, kuwaas oo saameyn ku yeesha dhibaatada galmada la dareemi karo waqtiga ugu gaaban.
(2). Miyuu PT-141 ku haboon yahay haweenka?
Inkastoo ragga iyo haweenka labaduba isticmaalaan PT-141, waxay cadeeyeen inay tahay haweenka ugu jecel. Sababtoo ah waxay bixisaa faa'iidooyinka ugu badan iyo saameynta daawooyinka kale ee yar marka loo eego kuwa kale. Calaamadaha kaliya ee saameeya iyaga ayaa ah lallabo iyo matag, taas oo dhif ah.
Intaa waxaa dheer, dheddigga ayaa ka jawaab celiya daroogada marka loo eego ragga. PT-141 waxay u timaadaa sidii badbaadiye haween sababtoo ah waxaa jira daroogo aad u yar oo wax ka qabta haweenka kufsiga.
Habka ugu caamsan ee codsiga PT-141 waa iyada oo la isku duro. Cirbadani badanaa waxay faa'iido u leedahay ragga iyo dumarka labadaba daaweynta dhibaatooyinka jahwareerka galmada.
Cirbadaha waxaa badanaa loo maamulaa si taxadar leh, halkaas oo ay jiraan kayd kayd badan. Inta badan, dhibcaha cirbadaha ayaa ku wareegsan aagga caloosha iyo caloosha hoose ama bowdada. Dhibbanayaasha waa in la siiyaa waqti isku mid ah maalinta si aad u hesho ugu fiican Khibrada PT-141.
Qiyaasta guud ee PT-141 ee ragga iyo dumarka labaduba waa 2mg, oo la siin doono hal saac kahor galmo. Haddii aad sameysid markii ugu horreysey, waxaad 1mg iska duri kartaa qiyaasta tijaabada ah ka hor inta aadan ku darin sodon daqiiqo kale oo 1mg ah.
Si looga fogaado xad-dhaafka, waa in aadan ka badneyn 2mg laba todobaad. Waa inaad marwalba doorataa waqtiga ugu fiican, taas oo kugu habboon.
Buufinta PT-141 waa hab kale oo caadi ah oo loo maamulo PT-141. Dad badan ayaa doorbida sababta oo ah way fududahay in la isticmaalo. Kaliya adoo neefsanaya PT-141, waxaad ku gaari kartaa libido aad raadineysay. Halkan waxaa ah tallaabooyinka aad qaadatid codsiga buufinta sanka ee PT-141;
Suufka si tartiib ah u neefso si aad u nadiifiso marinka daawada.
Akhri dhammaan tilmaamaha ku yaal baakadka ka hor intaadan maamulin. Ruxin isticmaalka ka hor intaadan isticmaalin qadar yar haddii taasi la tilmaamay.
Si tartiib ah u dabool saabuunta oo u neefso daawada afkaaga. Taasi waa la isticmaali karaa markaad taagan tahay meel qumman si aanad u jilcin doonin madaxaaga dambe. Had iyo jeer ku nadiifi dhalada nadiifka ah oo ku habboon si aad isaga ilaalisid wasakheynta.
Dhimashadaydu waxay ku soo noqotay mid caadi ah
Agnes K ayaa leh, "Marka hore, waxan soo iibsaday alaabtan maqaarka. Maqaarku si fiican ayuu uga jawaabay, waxaan go'aansaday inaan sii wado isticmaalka. Mid ka mid ah waxyaalihii iga dhigay inaan jeclaado khibradda PT-141 waa xaqiiqda ah in uu kordhiyo libido. Uma maleyneynin in libido uu mar uun isbeddelayo tan iyo markii aan isku dayey inaan ku dhajiyo dhammaan waxyaalihii dheeraadka ahaa ee loo yaqaan 'kiniiniga' Laga soo bilaabo habeenkii ugu horreeyay ayaan u isticmaalaa, rabitaankeyga ayaa halkaas joogey. Hadda waxaan ku raaxeeyaa lammaanahayga habeen kasta. Aniga waxaan dareemayaa yaabay sababta aan hore u ogaanin. Runtii, waxaan dareemi karaa faraq badan. "
Saameyno yar oo yar
Lilian D. wuxuu yiri, "Waxaan galmoodi kufilan jiray ilaa inta aan xasuusto. Dilka libaax wuxuu ka soo baxay mid firfircooni ah si uusan waxba u dareemin xitaa inta uu socdo. Waxaa la ii qoray kiniiniyada qaarkood dhakhtarkeyga, waxaana ka necbahay saameyntiisa, gaar ahaan wadna garaacida iyo hurdo la'aan. Hase yeeshee, waayo-aragnimadayda PT-141, si kastaba ha ahaatee, way kala duwan tahay. Marar dhif ah ayaan qabaa saameyn kasta, iyo xittaa laga bilaabo Dib u eegista PT-141 Waxaan aqriyay shabakada internetka, dad tiro yar ayaa ka soo gaaray mid kasta. Iyada oo kobcinta galmada this, hadda waxaan awoodi karaa inaan ku raaxaysto noloshayda jinsiga iyada oo aan ka bixin qiimaha waxyeellooyinka badan ee waxyeelo badan. Waad ku mahadsan tahay, PT-141.
Waxay bixisaa natiijooyinka ugu fiican
Maggie S. ayaa yiri, "Waxaan la qabatimay maqaarka maqaarka, waxana ay sameynayeen muddo shan iyo toban sano ah. Waxaan u maleynayay inaan isku dayo inaan badeecadan ka eego ka dib markii aan akhriyay PT-141 dibna u arko dhowr ka hor iyo ka dib sawirrada muujiyay sida ugu wanaagsan ee ay u siin karto tan dabiici ah. Waan la yaabay waanan ku faraxsanahay natiijooyinka. Iibsashada caato ee aan isticmaalayo ayaa iiga tagay qadhaadh laga yaabo, laakiin taasi waa wax hadda ka hor. Noocyada roodhida ah ee ay i siiyeen way baxeen, waxaanan hadda muuqanayaa dabiiciga. Waan jeclahay xaqiiqda ah in qof kastaa u maleeyo in aan ku dhashay sidan oo kale. Iskuday tan, mar walbana marnaba dib uma eegi doontid. "
Waxay bixisaa orgasmiska ugu wanaagsan
Benjamin Paterson ayaa yiri, "Dhowaan, xaaskeyga ayaa joojiyay orgasas, wax kasta oo aan isku dayay waxay u muuqatay inay garaacday dhagax. Waxay ka luntay xiisaha, anigana waxaan lumiyay kalsooni-galnimadayda sababtoo ah waxaan dareemay inaanan ku qancin karin. Waxaan la hadlay dhakhtarka, waxana uu soo jeediyay inaan isku dayo tan. Wax yar ayaan ka walaacsanahay, laakiin waxaan go'aansaday in aan xaaskeyga ku bixiyo maalinteeda dhalashadiisa iyo sida ay u socoto. Si layaab leh, waxaan heysanay habeenkaas. Waxay kufaraxday taabashada ugu yar yar waxayna igu tiri inaanay waligeed ku jirin orgasmooyin aad u xoog badan sanado. Waxaan dareemay fiicneyn ugu dambeyntii, xaaskeyga ayaa ku riyaaqi kara jacaylkiisa. Waxaan ku amarnay uun shixnadeena soo socota, mana sugi karno. Waxaan kugula talin doonaa qof dareensan sida ayan u noqon karin orgasm. "
Jesica S. wuxuu yiri, "Waxyaabahaan soo jiidashada galmadu waa waxyaabaha ugu fiican ee aan soo gaadhay ilaa hadda. Waxaan ku dhacay da 'yar oo da' yar oo da 'yar sababtoo ah xaalad caafimaad oo aan dhibsaday, mar walbana marna isku mid ma noqon. Marka laga reebo qallalinta siilka iyo dareemida raaxo la'aan, marwalba waan xanuunsadaa maxaa yeelay marnaba kuma faraxsaneyn galmo. PT-141 ayaa i caawisay, khaasatan orgaannadayda. Waxaan dareemayaa tamar, waxaan marwalba rabaa. Ninkeyga ayaa sheegay inaanan waligey u galmoonin, hada waxaan rabaa in aan isticmaalo. PT-141 ayaa isbedel weyn ku sameeyay noloshayda guurka, weligeedna waan ku mahadsanahay. Waa qiimo kasta oo waliba. "
8.Halista ka dib isticmaalka PT-141
Dad badan oo qaata daroogadaan, waxay la kulmaan wax wanaagsan Natiijooyinka PT-141. Looma yaabin inay weli ku tiirsan yihiin si loo daaweeyo cillad galmo iyo sidoo kale maqaarkooda. Inkasta oo ay bixiso waxaas oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida ay jirto faa'iidooyinka PT-141 inay halis tahay.
Taas macnaheedu maaha inaad dhib u yeelato saameynta daawada; Halkii, waxaa jira khatarta ah in wax aan la rabin ama aan la fileynin dhici karto. Qaarkood waxay noqon karaan kuwo aad u fudud oo aad si yar u aragto. Qaar kalena waxay tagaan labada saacadood ee ugu horreeya ee isticmaalka. Waa kuwan qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee laga yaabo inaad ku xanuunsato markaad isticmaasho PT-141;
Kordhinta dembiyada galmada- Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​daroogada si ay ugu lug yeeshaan faraxumeynta galmada iyo noocyada kale ee rabshada galmada. Taasi waa sababta oo ah mid aan diyaar u ahayn in ay xakameyso jacaylka jinsiga ah ee ay ku dhameeyaan dembi galmo.
Rabitaanka galmada ee aan ka tegeynin - Dareenka xad-dhaafka ah ee galmada xitaa ka dib marka uu qabo waa mid ka mid ah saameynta aad u xanuun badan tahay ka dib qaadashada daawadan.
Kedis degdeg ah ka dib markaad isku durto daawadan
Dhibaatooyinka caafimaad, sida cadaadiska dhiigga oo sarreeya
Xanuunka meesha laga duray - Cirbadaha waxaa loo yaqaanaa in ay yaraadaan raaxo la'aan ka dib maamulka. Taasi caadi ahaan caadi ahaan waa caadi haddii xanuunka uu noqdo mid daran ama goobta uu cudurku ku dhaco. Si looga fogaado dhacdadan, had iyo jeer isticmaal irbad nadiif ah si aad u bixiso duritaanka.
Infekshinka neefta sare
Lahaanshaha lammaane waa inuu ahaadaa midabyo, jacayl, shokato, iyo jacayl. Haddii tani aysan ahayn xaaladdaada, markaa waxaad heli kartaa naftaada walaaca, gaar ahaan haddii aad qabto dhibaatooyinka libido. Ma aha oo kaliya jinsi muhiim u ah xiriirka, laakiin waa qayb muhiim u ah nolosha aadanaha. In aad haysato nolol wanaagsan oo jinsi ah ayaa lagu xaqiijiyay in la wanaajiyo midnimada guud ahaaneed waxaana looga hortagi karaa mid ka mid ah cudurada qaarkood.
Haddii aad dareentay sida nolosha jinsigaaga ay noqoto mid caajis ah, oo aad si tartiib tartiib ah u lumiso xiisaha, waxaad u baahan tahay inaad ku maalgeliso farxad galmo. Markaad raadineyso wax si aad u kululaatid noloshaada jinsigaaga, waxaad u badan tahay in aad ka soo baxdo talooyin iyo xirfado badan oo aan wax ka beddeli karin. By ku daraya xoojiyeyaasha jinsiga, waxaad sameyn kartaa galmo raaxo leh oo xiiso leh.
Maanta dad badan oo ka soo jeeda jimicsiga oo ku yaal suuqa ayaa ballanqaaday inaad kordhisay libido iyo dulqaad. Inta badan kuwani waa jaangooyooyinka suuq-geynta oo iibiya istaraatijiyadaha iibka.
Xaqiiqdii, intaa ka badan oo ka mid ah waxyaabahan dheeraadka ah ee caafimaadku maaha kuwo cilmi baaris ah lagana baaro iyo waxa laguu sheego waxay noqon kartaa mid sax ah. Ka hor inta aanad u galin horumarinta jinsiga, waa inaad u tagtaa mid kuugu badbaado, taasina waxay ka timaadaa bixiye la aamini karo. Tayada waa inay had iyo jeer noqotaa mudnaanta ugu sareysa markaad go'aansato inaad sawir qaaddo jimicsigaaga jimicsiga.
Haddii aad wali ka yaaban tahay hindisaha galmoodka ee iibsashada iyo meesha aad ku iibsan lahayd, markaa waxaan kaa caawin karnaa go'aankaas. Waxaan nahay kuwa ugu fiican Soo saaraha PT-141 kuwaas oo ku siin doona PT-141 ugu fiican ee kufsiga. Waa maxay sababta aan maanta ku dhejin karin jinsigaaga?
Cilad-xumada, Dhibaatada xarumaha Urolojiga-E-Book, Culley Carson
Marta Meana Maqnaanshaha Galmada Haweenka, By Marta Meana.
Haweenka Isku-xirka Galmada iyo Qalitaanka, oo ay sameeyeen Elisabetta Consantini, Donata Villari, Maria Teresa Fibcamo
2019-10-30 at 1: 38 pm
Hallo, gibt es dhintaa Medikament auch ee Pulver?
2019-10-31 at 3: 33 am
Ja, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der dhalmada PT141 empfohlen. Es ist PT141 Injektion.
2019 Sermorelin Acetate Reviews: Dagaal Dhimista iyo Miisaanka lumis!